​गाउँ र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि कसरी निर्वाचित हुन्छन्? :: PahiloPost
​गाउँ र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि कसरी निर्वाचित हुन्छन्?
काठमाडौः नेपालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय संसद्को माथिल्लो सदन् 'राष्ट्रिय सभा'मा उम्मेद्वार बन्ने तथा मतदान गर्ने अधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३१ गते हुँदैछ।
आगामी २०७४ साल वैशाख ३१ मा हुने चुनावले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि दिने मात्र नभई स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै केन्द्रसम्मको प्रत्यक्ष पहुँचसमेत स्थापित गर्नेछ।
​गाउँ र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि कसरी निर्वाचित हुन्छन्? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।